musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Air India: Pakupedzisira paKufamba?
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Zvinhu zvinoita sekunge zviri kupedzisira zvaenda pane yakakosha nyaya yekuti ndiyani achatora uye kumhanyisa Air India, inova ichaiswa disinvested nehurumende.
Vabhizimusi vekudyara zvemari vari kupedzisira vabuda kunhandare yendege yeAir India.
Pave nemakore akati wandei achiedza kutengesa mutakuri wenyika, nekuyedza kuvharwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana uye zvakawanda.
Zvichiri padhoketi ndiko kurasikirwa kukuru kwendege - sekunge ndiani achazvibata - mutengi mutsva kana hurumende?
Tata Vanakomana, iyo yakavambwa Air India yendege muna 1932 uye ndokuzobuda mairi muna 1953, yave zvakare bhidhaiti yendege, uye yakaendesa mabhizimusi emari pamwe chete nevamwe vanokoka mabhizimusi.
Sachigaro weSpiceJet, Ajay Singh, apawo chipo, uye dzimwe mari dzekudyara dzakabatanawo naSingh mukubhidha mari kuti awane iyo ndege. Singh anga ari mutambi mukuru munhandare yendege kwemakore akati wandei izvozvi, uye basa rake izvozvi mu Air India iri kutariswa nekufarira kukuru.
Kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwemutengo wekuchengetedza zvinhu zviviri zvakakosha izvo hurumende inofanira kugadzirisa. Zvimwe zvinhu zvave kunetsekana mubvunzo wekuti ungaita sei nekurasikirwa kukuru kwakaunganidzwa neAir India mumakore apfuura, uye kuti zvimwe zvinhu zveMaharaja mutsara zvinorapwa sei, kusanganisira zvivakwa zvacho uye kuunganidzwa kwounyanzvi. Kubata kwepasi uye kwekudya kwemhepo kwave kuriwo nenyaya dzekunetsekana kubvira pakataurwa nezve disinvestment.
Mumakore mashoma apfuura, kuyedza kwakawanda kwakaitwa kutengesa mutakuri wenyika, asi kuyedza uku kwakadzoserwa kumashure nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Chimwe chezvikonzero chikuru ndechekuti upindure sei mubvunzo wekuti ndiani achabata kurasikirwa kukuru - mutengi mutsva kana hurumende?
Vashandi nyaya zvakare yave imwe nzvimbo yekutambudzika, iine mibvunzo yekuti ndiani achachengetwa nemutengi mutsva, uye ndiani achadzingwa? Mibatanidzwa nemasangano panguva imwe chete vaida chaizvo kutaura uye vaitofunga zvekubhidha.
Basa, kana riripo, revatengi vekunze raive zvakare hurukuro yekukurukurirana, asi izvozvi zvinoita sekunge vatengi vakuru vauya nemabhidi emari muchimiro chekutora chikamu kwaTata naAjay Singh.
JA Solar inopa magetsi egirinhi kuMitambo iri kuuya...
Nguva Yekumisa Ndege kuenda kuSouth Africa? A New...
Yambiro yeGomarara: Chirungurira Chinogona Kuva Nengozi
VaDaniel Pimental anoti:
Svondo 19, 2021 pa 07: 47
Ndinoziva hazvisi nekuti ndinoda kuva newe. Ini handidaro. Dzimwe nguva ndinonzwa sekuti ndinokodzera kuve newe, sekunge ndinokodzera kurwadziwa kwaunondiunzira zviri nyore. “Tarisa, kana uchinyatsoda kuenderera mberi mushure menguva yese iyi, unofanirwa kumuregerera pakurwadziwa kwaakakonzera, zvisinei kuti ndiwe here.